I-china abakhiqizi be-Trixylyl Phosphate nabaphakeli | Inhlanhla
Izinto Zokuhlola Izinga Lokuhlola
Ukubukeka Utshwala Okhanyayo Okhanyayo Ophuzi
Umbala we-APHA ≤200
Umuncu mgKOH / g .20.2
I-Gravity eqondile g / cm3 （20 ℃）
I-Flash Point ℃ ≥230
Okuqukethwe kwamanzi% .10.1
Inkomba yokubonisa （25 ℃） 1.550～1.560
I-viscosity mP · S (25 ℃) 80～110
Isetshenziswa njenge-flame retardant ne-plasticizer ye-PVC eguquguqukayo, i-phenolic resin, i-epoxy resin ne-PU enamathela.
Ukupakisha: 230kgs / iron sigubhu, 1200kgs / IBC, 20-25tons / isotank
1. Q: Ingabe wenza?
Sisungule izitshalo ezine ze-OEM eLiaoning, Jiangsu, Tianjin, esifundazweni saseHebei naseGuangdong. Umbukiso omuhle kakhulu wefektri nomugqa wokukhiqiza usenza sifanise ukufunwa kwawo wonke amakhasimende. Onke amafemu ahambisana ngokuqinile nemithetho emisha yezemvelo, ukuphepha kanye nezabasebenzi evikela ukutholakala kwethu okusimeme. Sivele siqedile i-EU REACH, Korea K-REACH ukubhaliswa okugcwele kanye ne-Turkey KKDIK pre-registration yemikhiqizo yethu emikhulu
2Q: Ungumhlinzeki onolwazi kulayini?
Siyinkampani okuyiyo ehlangene yezohwebo nezimboni ngakho-ke sihlinzeka ngentengo yokuncintisana nekhwalithi ephezulu yomkhiqizo.Umthamo wethu wokukhiqiza wonyaka ungaphezu kwama-20,000tons. U-70% womthamo wethu uthumela emhlabeni wonke e-Asia, eYurophu, eNyakatho Melika, eMpumalanga Ephakathi, eS. America njll. Inani lethu lonyaka lokuthekelisa lingaphezu kwezigidi ezingama- $ 16.
Asikwazi ukupakisha ngokuya ngesicelo samakhasimende.
3.Q: Utholakalaphi? Yini imbobo yakho yokuthumela?
Sinikeza insizakalo yezinto ezikhethekile kubandakanya isimemezelo sokuthekelisa, imvume yamasiko kanye nayo yonke imininingwane ngesikhathi sokuthunyelwa.Sitholakala eSuzhou City, eSifundazweni saseZhangsu, eSouth-East yaseChina, isitimela esiphakeme semizuzu engama-60 sisuka eShanghai.
Imvamisa ukuthumela kusuka eShanghai noma eTianjin.
4.Q: Ingabe unikezela ngamasampuli wamahhala? Singathola kanjani amasampula kuwe?
Sinesampula samahhala, kepha udinga ukukhokha imali ebonakalayo.
5.Q: Yimiphi imigomo yokukhokha oyamukelayo?
L / C, T / T, D / A, DP.West Union, ect.
6.Q: Uyakwamukela ukuhlolwa komuntu wesithathu?
Langaphambilini ICresyl Diphenyl Phosphate
Olandelayo: I-Tri (2-ethylhexyl) i-Phosphate